UMqondisi oMkhulu - Isekela Jikelele ngokuzwakalako. Kodwa uma ukufanise ngqo iSekela leJaji main ke siqiniseka ngokugcwele singasho ukuthi imithwalo yakhe yemfanelo kukhona ngobubanzi okuningi. Imisebenzi COO zihlanganisa ekwengameleni zonke izici inqubo umsebenzi kule nkampani. Ngamanye amazwi, uma i-General ukwenza ekubhaleni business plan, inhloko tekusebenta ithuthukisa futhi linikeza amacebo ukuqaliswa yayo. Lokhu ukwehlukana imisebenzi ivumela ikhanda wenkampani isikhathi esengeziwe ukuxhumana namakhasimende kanye nabalingani, nokususa uyala ukuvusela umfowabo igama ukuxazulula izinkinga zangaphakathi kanye oqapha umsebenzi wabo enhlanganweni.
Ezimweni eziningi, le umqondisi ophethe ovumelekile ukuba abe khona emihlanganweni Ebhodi Yabaqondisi, okuyinto umnikeza ithuba simele izintshisekelo inkampani ekusebenzelaneni abalingani kanye zimali. Futhi, wamphathisa ukusayinwa yonke imibhalo ephathelene ibhizinisi ibhizinisi. Umsebenzi oyinhloko we-umqondisi ophethe i-control zokukhiqiza, kanye kucinisekisa kusetjentiswa esifike ngesikhathi kuzo zonke izibopho kuso izivumelwano inkampani.
Kukhona uhlu wemisebenti lebalulekile uMqondisi oMkhulu phezu yesimanje, inkampani asathuthuka. Eyokuqala kakhulu okufanele ukusho ukuphathwa inqubo ukukhiqizwa. Chief Operating Officer kuyakuba izinhlelo zokukhiqiza futhi ukuqapha abasebenzi babo ukusebenza. Futhi, imisebenzi yakhe ihlanganisa ukulawula kokuthola zonke ezidingo ezidingekayo ukuze ukukhiqizwa, kukhona akucabangayo izinto zokusetshenziswa hhayi kuphela, kodwa futhi ukukhethwa imishini kanye nabasebenzi ezifanele. Uphinde obhekene nokugcinwa wonke amayunithi ukukhiqizwa. Ngemuva ke Usungula isibopho ukuqapha abasebenzi, ukuze ingangqubuzani imithetho yokuphepha, imikhiqizo babe high kanye nazo zonke izindinganiso. On umthwalo wakhe zonke izindleko zokukhiqiza futhi ukubulawa isikhathi umsebenzi. Job Description Umqondisi kuhlanganisa isidingo ukuba sithathe izinyathelo uyokhuthaza ukukhula kwemikhiqizo lifakazelwa, ekufezeni izenzo okuhloswe ngazo ukunciphisa umshado zokukhiqiza, izinyathelo nokwandisa izinqubo zokukhiqiza, kanye okwandisa zabasebenzi umkhiqizo.
Okulesi okuthunyelwe esiphezulu yokusebenza isikhulu, obhekene nezabasebenzi ukuphathwa. yemisebenzi yakhe ihlanganisa uhlela nokuqasha abasebenzi kudingekile ukuba afeze amacebo yenkampani, ukubala kwabasebenzi izindleko, kuhlanganise iMali kwadingeka kwezinhlelo zokuqeqesha yayo. Ngaphansi kophiko lwayo nokuphathwa yilona nabaqashwa uma abasebenzi babo abantu abangaphezu kuka-100. Chief Operating Officer kufanele Ukuqapha ukuqaliswa ngesikhathi esifanele imigomo ukwaneliseka ngokwazi ukuthi kukhona izibopho amakhasimende yenkampani. Kumelwe futhi ukubhekana nazo zonke ezinye izindaba ukusebenza, kuhlanganise nokusetshenziswa amasevisi ukukhiqizwa, control kolwazi nobuchwepheshe, technical support kanye nomsebenzi efana nezikhathi ukusebenza.
Ekusebenteni, izinkampani e yesimanje adinga abasebenzi ezikhundleni zokuphatha, okuyinto awela izigaba ezine izinhlobo COO imisebenzi. Khetha uhlobo olufanele umsebenzi kungenziwa kuphela ecacile, imiphi imigomo ubeka yokumba futhi yini umphumela umsebenzi onjalo liyadingeka.
Ngokuvamile, izinkampani kudingeka Innovator. Lokhu Uchwepheshe bazokwazi ukuthi iqalise yemfanelo ukuphathwa isiqondiso entsha amasu, ukuqondisa ukuqaliswa amaphasela izinyathelo ngcono inkampani. Kulokhu, kufanele ukhethe ukhetho ngubani babe engasenathonya, badinga ukuze nidonse ukunaka, ukushukumisa abasebenzi nge imibono yabo, ukuhola isimo lapho kugcwaliseka Izinjongo wenhlangano.
Uma inkampani yakho has a CEO intsha nabangenakho okuhlangenwe nakho, kufanele ucabangele uhlobo - umeluleki. Uchwepheshe kulendawo kuyoba basekela, kuyokusiza ukuba esihle kutsha izinqubo zebhizinisi, kuhlanganise ukumaketha, ezezimali, yokuthengisa, nokunye. Uma inkampani has a isidingo umsebenzi onjalo, bese kudingeka ubheke professional, has inqolobane enkulu nolwazi, okuhlangenwe nakho kanye nobufakazi ekusetshenzisweni kwazo practice. Ekahle kungaba ukuthola umsebenzi ovele ukuxhumana ewusizo, ukuze asize inkampani ukufinyelela okunamandla ewusizo kubantu ibhizinisi.
Ezinye izinhlangano kokuthunyelwe esiphezulu yokusebenza isikhulu ngifuna indoda kamuva kufanele idluliselwe ukuphathwa inkampani. Kulokhu, kubaluleke kakhulu ukuthola abangochwepheshe uzokwazi ukuqhubeka nomsebenzi luhamba luye ohlangothini olulodwa. Awukwazi ukukhetha yilungu labasebenzi ukuthi ubani obona ukuthuthukiswa kwebhizinisi ngendlela yabo. Yena yedwa kumelwe asondele ndaba kanye jikelele, isipiliyoni sabo kanye umbono ngekusasa kumele kube okufanayo. Uma kungenjalo, kungenzeka kuvela izingxabano sina lapho ukwenza ibhizinisi.
Enye ezihlukahlukene izikhundla ezibalulekile COO - umlingani. Kubalulekile ukuthi jikelele neyokuphatha share ezindinganisweni ezifanayo. ukukhethwa kwabasebenzi Inketho engcono kungaba ukwelekelela lwati nemakhono abo ukuphathwa ekhona kakade. Kunezibonelo ezimbili ongabonisa inhlanganisela ephelele izimiso umsebenzi zabantu ezimbili tebuholi. Esimweni sokuqala, wokuba ngumqondisi jikelele ungenziwa ithambe futhi liberalisticheskim futhi ezisebenza Kunalokho, kanzima, futhi ngokucophelela nokuhlola konke ukuphithizela izindawo inkampani. Esimeni sesibili, inhlanganisela ephelele kukhona CEO, inkampani wahlanganyela ukuthuthukiswa, ekutholeni niches entsha emakethe nezinye izinto zangaphandle, kuyilapho umphathi yesibili okumelwe ubhekane nawo izinqubo zangaphakathi kanye ukuqapha izimali ibhizinisi.
Lokho kufanele ukwazi umuntu ofuna ukuthatha lesi sikhundla
Okokuqala lapho eqasha abantu lesi sikhundla naphezu imfundo ephakeme. Futhi a plus nakho oshayelayo, okuyinto iminyaka engaphezu kwemibili. Kubaluleke ngokufanayo ukuba othile zobuntu, amakhono ezingaba ukuqinisekisa ukusebenza kahle.
Phakathi izici eziyinhloko wukunikeza: inhlangano, amandla ukucabanga kohlaziyo futhi indlela ehlelekile ukuze yekusombulula inkinga, ikhono bakwazi ukwenza izinqumo ezivuthiwe, lithathelwe lula izinguquko ashukumisayo, amakhono yenhlangano. Kubalulekile futhi ukuthi umuntu wayengangena kanjani ukukhuluma eningini, ukukhuluma ngendlela efanele futhi wayenekhono omkhulu lokusingatha lokhu kucindezeleka. Kubalulekile futhi ukuthi kuyaqondakala emkhakheni lapho umsebenzi wenkampani uqondiswa. Kufanele kuqashelwe ukuthi incazelo umsebenzi ukuze umqondisi ophethe inkampani ngayinye ihlukile. Kukhona isimo sokunquma eyisisekelo, kodwa ngoba lo msebenzi kungokwalabo eyinkimbinkimbi futhi kudinga ukucindezeleka okuningi, konke kuncike isiqondiso ibhizinisi ezicashile isu ekukhuleni wenkampani.
Njengoba lesi sikhundla kuhilela ukuphathwa inkampani, umthwalo esiphathiswe induna yokusebenza isikhulu, akukho esingaphansi jikelele. Umthetho, umuntu onesitifiketi lesi sikhundla uyokhokhiswa ngokugcwele. Futhi, ingaphambi sisolwe ngokuphelele zonke izinqubo ibhizinisi, kubandakanya umsebenzi abasebenzi. Chief Operating Officer kungenzeka ibe ngaphansi kwegunya zokuphatha, zabasebenzi, civil kanye nomthetho wezobugebengu icala, njengoba isikhulu enkampanini. Wabuye unesibopho ngemiphumela yezinqumo, oda nokunye.
Commercial Umqondisi - kuyinto ... Umqondisi Commercial Affairs. Isikhundla "umqondisi commercial"
Indlela Ubungozi ezisekelwe kokumelwa nokuphoqelela imisebenzi
Ukuphathwa akhawunti Iyatholakala ibhizinisi kumele kwenziwe ku inkampani ngayinye
Amaphilisi avikelekile kakhulu
What do amaphuzu ukutshopa emzimbeni womuntu
Ukwahlukanisa izinhlanzi: ngesisekelo taxonomy nezibonelo
Isakhiwo ehhotela "Emerald", Vityazevo: Izibuyekezo
I-Rayaburi Hotel Patong 3 * (Thailand / Phuket): isithombe nokubuyekezwa kwezivakashi
Isinqumo sama-Architects: izakhiwo ezingu-22 ezinhle kunazo zonke emhlabeni
Ukwesekwa wezomthetho ucabanga - insindiso inkampani yakho
Single-isigaba wesifunda full: incazelo idivayisi iphinde uxhumano